Covid-19 ၏ သက်ရောက်မှုကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုရှိသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အစိုးရက ကျပ် ဘီလီယံ (၁၀၀) ထုတ်ချေးပေးမည်ဟု ကြေညာပြီးနောက်တွင် တတိယအသုတ်အဖြစ် လုပ်ငန်း (၁၁၁) ခုကို ကျပ် ၃ ဒဿမ ၅၄၆၆ ဘီလီယံထုတ်ချေးထားကြောင်း ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်ထံမှ သိရသည်။ အဆိုပါ ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်းကို ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်မှ ဦးဆောင်၍ ချေးငွေလျှောက်ထားခြင်းကို ဧပြီ ၉ ရက်အထိ နောက်ဆုံးထားလျှောက်ထားခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ယခု ထုတ်ချေးသည့် လုပ်ငန်း (၁၁၁) ခုအပြင် ချေးငွေလျှောက်ထားသည့်လုပ်ငန်းများကျန်ရှိနေသေးပြီး အဆိုပါလုပ်ငန်းများ၏ချေးငွေလျှောက်ထားခွင့်ကို ဘဏ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ စိစစ်၍ ချေးငွေထုတ်ချေးပေးနေကြောင်း ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်ထံမှ သိရသည်။ အဆိုပါ အစိုးရ၏ စီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေး Covid-19 fund ထဲမှ ပထမအသုတ်အဖြစ် ချေးငွေ...
U Thein Swe, the Union Minister of the Ministry of Labour, Immigration and Population, has pledged during the meeting with representatives from labor unions and officials from the UMFCCI, that he will convince the landlords to postpone the monthly payments for apartments or lodging houses. “The Yangon Regional government will...
By Robin Emmott BRUSSELS, May 12 (Reuters) - European Union plans foramulti-billion euro defence fund have been thrown into doubt by the economic shock of the coronavirus, officials and diplomats say, potentially threatening three years of unprecedented military cooperation. With EU governments focused onatrillion-euro plan to offset...
American sportswear maker Under Armour recently opened its first brand-house store in Myanmar as part ofamove to expand its brand presence in Southeast Asia. Located at Myanmar Plaza, the 1,884 sq.ft. store is open from 10 a.m. to 10 p.m. “Although the sports category is still at an early...